တရုတ်နိုင်ငံ ကျန်းဆူးပြည်နယ်၌ COVID-19 ရောဂါ အန္တရာယ်မြင့်မား၊ အလယ်အလတ်အဆင့်ဒေသများ ကင်းစင် - Xinhua News Agency
နန်နင်း၊ စက်တင်ဘာ ၉ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံတွင် မကြာသေးမီက COVID-19 ရောဂါ ပထမဆုံးတစ်ကျော့ပြန်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကျန်းဆူးပြည်နယ်တွင် စက်တင်ဘာ ၉ ရက်၌ အန္တရာယ်မြင့်မားနှင့် အလယ်အလတ်အဆင့်ရှိသော ဒေသများအားလုံး ကင်းစင်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။အဆိုပါ ပြည်နယ်ရှိ နောက်ဆုံး အလယ်အလတ်အဆင့်ရှိဧရိယာဖြစ်သော ယန်ကျိုးမြို့ရှိ လူနေရပ်ကွက်တစ်ခုကိုလည်း အကဲဖြတ်စစ်ဆေးပြီးနောက် ညသန်းခေါင်ယံအချိန်မှစ၍ အန္တရာယ်လျော့ပါးအဆင့်သို့ လျှော့ချခဲ့သည်။
ဘတ်စ်ကားများသည်လည်း စက်တင်ဘာ ၉ ရက်တွင် မြို့၏ အဓိကမြို့ပြဧရိယာ၌ ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန်ပြေးဆွဲရန် စတင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် နေထိုင်သူများကိုလည်း အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှုကိုလည်း လျှော့ချလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လေဆိပ်များ၊ ရထားဘူတာရုံများ၊ ဆိပ်ခံတံတားများနှင့် အဝေးပြေးဂိတ်များ အပါအဝင် ယန်ကျိုးမြို့ အများပြည်သူဆိုင်ရာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ဘက်စုံပြန်လည် လည်ပတ်ရေးကို စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်မှ စတင်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုများအား ယင်းမြို့တွင် COVID-19 အတည်ပြုလူနာ သို့မဟုတ် ရောဂါလက္ခဏာမပြသော ရောဂါပိုးသယ်ဆောင်သူများအား ဒေသခံများအတွင်း အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှုကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် စတင်ခဲ့ချိန် ဇူလိုင် ၃၁ ရက်မှစ၍ ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယန်ကျိုးမြို့တွင် ရပ်ရွာလူထုအတွင်း အစုလိုက်အပြုံလိုက် ရောဂါကူးစက်မှုများ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် မြို့တစ်ခွင် nucleic acid စစ်ဆေးမှု အကြိမ်ရေများစွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ကျန်းဆူးပြည်နယ်တွင် ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုကို ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် ကူညီရန် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ၄,၀၀၀ ကျော်၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းနှင့် ဒေသခံဝန်ထမ်း အမြောက်အများ စည်းစည်းလုံးလုံးဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ (Xinhua)
China’s Jiangsu clears high, medium risk areas of COVID-19
Source: Xinhua| 2021-09-09 11:30:25|Editor: huaxia
NANJING, Sept.9(Xinhua) — China’s Jiangsu Province, where the country’s recent COVID-19 resurgence first emerged, cleared all high- and medium-risk areas on Thursday.
The last medium-risk area in the province,aresidential community in the city of Yangzhou, was downgraded to low risk starting from midnight after evaluation.
On Thursday, buses started to ply within the city’s main urban area and closed-loop management in communities was lifted.
Comprehensive resumption of Yangzhou’s public transportation services, including airports, railway stations, wharves and coach terminals, will start from Sept. 16.
Such services were sus pended from July 31, when the city started to implement closed-loop management in communities with confirmed cases or asymptomatic carriers of COVID-19.
Yangzhou had launched several rounds of citywide nucleic acid testing campaigns after cluster infections occurred in communities.
The province of Jiangsu mobilized more than 4,000 medical workers and thousands of volunteers and community workers to help the city contain the spread of the virus. Enditem
Photo : A health worker (L) fills outaform to report his health condition before receiving the COVID-19 vaccination atacommunity health center in Xuanwu District of Nanjing, east China’s Jiangsu Province, Jan. 21, 2021. (Xinhua/Ji Chunpeng)